Posted by Tranquillus | Sep 8, 2018 | Cilaaqaadka dadka dhexdooda
Is-dhexgalka dadka dhexdiisa ayaa ah mid ka mid ah qodobada wax ka beddelaya waxqabadka shirkadda. Marka si dhab ah loo qaato, waa hantida ugu weyn ee shaqaale kasta iyo sidoo kale ururka laftiisa. Tani waa sababta ay muhiim u tahay in ay ku dadaalaan mawduucaan. Su'aashu waa sida loo wanaajiyo si looga faa'iidaysto faa'idooyinka. Tani waa waxa aan ka arki doono hoos.
Fikradaha been abuur ah ee ku saabsan xidhiidhka dadka
Ma ka mid tahay dadka aan aqoon sida loo wanaajiyo xiriirkooda dadka kale, gaar ahaan goobtaada shaqada? La soco in caadooyinka xun xun qaarkood ay beddeli karaan isgaarsiinta inaad la leedahay saaxiibadaa. Waa kuwan talooyin aad u baahan tahay inaad iska bixiso si aad u hagaajisid xiriirkaada, iyadoon cidi ku jirin, oo aad la wadaagto.
Waxaan mar walba fahamsanahay waxa aan sheegayo
Ha aaminin in wax kasta oo aad sheegto marwalba uu fahamsan yahay qofka aad wada socotaan. Sidoo kale, had iyo jeer noqo qof u fiirsada oo isweydiiya haddii qofka aad la hadlaysid uu qabsaday wax kasta oo aad u sheegtay. Caadi ahaan, haddii aad si fiican u fahamsan tahay, qofka kula hadlaya wuxuu u gudbin karaa farriintaada hab kale, fiiro si aan is fahmin.
Kala hadal si aad u fahantid midba midka kale
Haddii fikradahaaga ama doodahaagu ay yihiin kuwo aan la fahmin sharraxaaddaada ka dib, ha ku adkeysan qaabkan hana kor u qaadin codka si aad adiguna u fahanto. Xaqiiqdii, habab kale oo ka fudud ama ka sawir badan ayaa kuu oggolaanaya inaad soo bandhigto fikradahaaga. Sidoo kale, isticmaalka aaladaha qaarkood ayaa si weyn kaaga caawin kara inaad tan gaarto.
Kala hadlida dhibaatooyinka oo dhan
Si aad u fekerto in si toos ah wax looga qabto dhibaatada had iyo jeer waxay xallineysaa sidoo kale waa qalad. Xaqiiqdii, kiisaska qaar waxay xallilayaan iyaga oo aan adigu la hadal xubnaha kale ee kooxdaada. Sidaa darteed marwalba u fiirso oo ogow in aamusnaanta ay tahay mid ficil ah xaaladaha qaarkood. Uma baahnid inaad noqoto mid ka hadlaya mowduucyada ka xanaajiya fursadaha kasta.
Xirfadaha isgaadhsiintu waa mid caadi ah
Shaqaaluhu ma awoodi karo inuu isgaarsiiyo xidhiidhka iyada oo aan la baranin aasaaska iyo la tababaray. Ka dib marka la eego tusaala-darrada, ka warhaynta sida loola xiriiro waa shaqeyn, qaarna si dhakhso ah ayay u samayn karaan, kuwa kalena ma awoodaan. Sidoo kale haddii dadka qaar ay leeyihiin saameyn dabiici ah, qaar kale waa inay tababaraan intaanay haysanin qirasho dabiici ah. Markaad raacdo talooyin ku saabsan mawduuca, waxaad ku wanaajin kartaa aaggan.
Si aad si fiican u taqaanid
In kasta oo aad had iyo jeer ku dadaasho inaad ilaaliso xiriir is-waafajin leh oo lala yeesho dadka kale shaqadaada, xaaladaha qaarkood waxaa muhiim ah inaad ka fikirto danahaaga ka hor kuwa kale. Ka soo horjeedka ayaa runtii saameyn taban ku yeelan kara wax soo saarkaaga, sabab wanaagsan oo lagu go'aamiyo waxaad dhab ahaan rabto. Marka loo eego ereyadaada iyo habdhaqankaaga, waxaad muujineysaa xaqiiqda:
Wadashaqeyn kasta wuxuu leeyahay shakhsiyad gaar ah, taas oo ah in la sheego sifooyinka isaga ka soocaya kuwa kale oo ka dhigaya aqoonsigiisa. Adiga oo tixgelinaya shakhsigaada, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato xaaladaha ama fursadaha ku habboon horumarkaaga iyo kuwa waxyeelo u geysan kara deegaankaaga. Waxaad awoodi doontaa inaad ku kalsoonaato naftaada.
Qiimaha aad ku qanacsan tahay
Qiyamkani wuxuu noqon karaa bulsho, diin, anshax ama wax kale, waana ku xiran tahay inaad maalgashato oo aad saldhigto nolol maalmeedka. Haddii sharafku yahay qiimo aad ku qiimeyso, waxaad had iyo jeer ixtiraami kartaa oo aad ku dhiirigalineysaa asxaabtaada inay ka fekeraan sida aad u aragto waxyaabaha ay kula macaamilayaan.
READ Koox shaqo oo wanaagsan
Qof ahaan, waxaad leedahay caadooyin kuu gaar ah. Qaarkood waxaa laga yaabaa in ay u roonaadaan xiriir wanaagsan, si fiican loo hayo, asxaabtaada, halka kuwa kale, maya. Isku day in aad aqoonsatid kuwa leh saameyn xun iyo wanaajin.
Ogow waxyaabaha aad u baahan tahay inaad si sax ah u sameyso shaqada. Sidoo kale samee shuruudaha aad rabto inaad sameyso. Xaqiiqdii, shaqaale badan ayaa noqon doona mid wax soo saar leh haddii la siiyay qalab sax ah si ay u qabtaan shaqadooda. Sida dad badani filanayaan jawaab celin wanaagsan ama ugu yaraan naqshad dhisid ah si loo hagaajiyo waxsoosaarkooda, ha noqon mid ka mid ah kuwa raali ka ah in ay ku shaqeeyaan xaalad kasta iyo si kasta.
Ogow sida loo aqoonsado caadooyinkaaga ka hor intaadan la hadlin saaxiib ama inta lagu jiro is-dhaafsigaaga. Xaqiiqdii, waxaa laga yaabaa inaad dareento farxad, murugo, caro ama cabsi. Adoo tixgelinaya gobolka aad naftaada ku aragto, waxaad u badnaan doontaa inaad qaadato go'aan sax ah ama dib u dhigista wareysiga si aad si fiican u fahamtid xaaladda.
Maxaa la yidhaahdo? Maxaa la sameeyaa?
Noqo toos, taas oo ah, u sheeg asxaabtaada fikraddaada maadada ama xaalad adoo adkeynaya adiga iyo fikradahaaga. Si tan loo sameeyo, caado u noqo inaad ku hadasho qofka ugu horreeya "I." Tusaale ahaan, “Waan ka naxay dib u dhaca ku yimid kulanka saaka. "Oo iska ilaali" qof walbaa wuxuu u maleynayaa in ka daahida kulanka in la ganaaxo. "
U sheeg xaqiiqooyinka. Ka fogow in aad go'aan ka gaarto hab dhaqanka asxaabtaada, kaliya sheeg xaqiiqooyinka. Tusaale ahaan waxaad dhahdaa: "macluumaadka aad wadaagtay maahan mid dhameystiran" halkii laga rabay "waxaad rabtaa inaad keli keli kaceyso xogta si aad awood ugu yeelato asxaabtaada. "
Dhaqdhaqaaqyada iyadoo la raacayo erayadaada: Waxa kale oo ay doorbidi kartaa in ay iska aamusaan halkii ay ku farxin lahaayeen saaxiibka shaqada aanad jeclayn. Xaqiiqdii, si loo dhiso xiriir wanaagsan oo aamin ah, waxaa muhiim ah in ficiladaadu ay la socdaan ereyadaada.
Weydii dadka kale jawaab celin
Dadka qaarkiis waxay leeyihiin xirfad isgaarsiineed oo dadka dhexdooda ah halka kuwa kale ay u baahan yihiin in la dareemo oo loo tababaro arimaha noocaas ah. Si looga fogaado marin habaabinta xirfadahaaga, weydii dhagaystayaashaada waxa ay ka fekerayaan sida aad ula dhaqantid maalin kasta.
Xukunka dahabka ee isgaarsiinta wanaagsan
Marka sidee uga dhigi karnaa nafteena inuu maqlo wada-hadalkeenna haddii aan nafteenna caado xun u leenahay inaanan dhageysan wuxuu noo sharaxayo? U fiirsashada ereyada qofka ayaa astaan ​​u ah ixtiraamka wada xiriirka dadka. Markaa iska ilaali inaad mashquuliso naftaada inta tan kale ay kula hadlayso. Markaa dib u sheeg waxa uu kuu sheegay si aad ugu caddeyso inaad wax walba fahamtay.
Inkasta oo talooyinkan la siiyay codsiga goobta shaqada, waxay noqon doonaan kuwo waxtar leh meel kasta oo kale.
Hagaajinta Isgaarsiinta Xirfadahaaga Shaqada Sebtembar 26th, 2018Tranquillus
horeXarunta Tababarka Geela
socdaSirdoonka shucuurta ee shaqada